Sida Dugsiyada Looga codsado Barta | Boston School Finder
Markaad tahay qoys kudhaqan Boston, waxaad helaysaa dookhyo badan oo dhanka dugsiyada ah. Dugsiyadaan waxaa kamid ah:
Boston Public Schools ("dugsiyada degmada" ama "BPS")
METCO (waa barnaamij ardayda reer Boston usafraan si ay wax ugasoo bartaan dugsiyada kuyaala magaalooyinka kale iyo caasimadaha kale ee gobalka)
dugsiyada gaarka looleeyahay/madaxa banaan
Hoos waxaa kuqoran sharaxaad faahfaahsan oo kusaabsan sida aad oga qori karto cunugaaga midkaad doonto oo kamid ah dookhyadaan. Haddii aad wax su'aalo ah kaqabto nidaamka isqorista, emayl noogusoo dir contact@bostonschoolfinder.org.
Nidaamka Isqorista ee dugsiyada Boston Public Schools (BPS)
Waxaa jiro kudhawaad 125 dugsi oo kuwa BPS ah kunayaala magaalada kuwaasoo ay dhigtaan in kabadan 50,000 oo arday guud ahaan fasal kasta – laga bilaabo dugsiga barbaarinta (da'da 3) ilaa dugsiga sare (da'da 18 iyo kasii wayn).
Sidee ayaan ilmahayga ugu diiwaangeliyaa BPS?
Waxaad cunugaaga kaqori kartaa xaruntaad doonto oo kamid ah BPS Welcome Center(Xarunta Soodhawaynta ee BPS). Waxaa qasab ah inaad dugsiga si toos ah utagto si aad iskuqorto. Kahor inta aadan dugsiga aadin, baar dookhyadaada dugsiga kana baar barta discoverBPS.org iyo barta Boston School Finder. Markaad diyaar unoqoto inaad dugsiga si toos ah utagto, xaqiiji inaad sooqaadato:
Labo cadaymood oo mujinaaya inaad Boston dagantahay
Shahaadada dhalashada ee cunugaaga ama baasaboorkiisa
Diiwaanka wali aan dhicin ee talaalka cunugaaga
Aqoonsiga ID ga waalidka oo sawir leh.
Goorma ayaan diiwaangalinayaa cunugayga galaaya dugsiyada BPS xiliga dayrta ee sanadka 2019?
Iskadiiwaangalinta dugsiyada BPS waxay bilaabmaysaa xili hore - mudada isdiiwaangalinta muhiimka ah waa laga bilaabo Janaayo ilaa bisha Maarso isla sanadka uu cunugaagu kubiiraayo dugsiga. Tusaale ahaan, haddii cunugaagu kubiiraayo dugsiga barbaarinta bisha Sebteembar sanadka 2019, markaas waa inaad qorshaysataa inaad diiwaangaliso cunugaaga inta udhaxaysa bilaha Janaayo iyo Maarso sanadka 2019. Waxaan sixoogan kuugu dhiirigalinayaa inaad cunugaaga diiwaangaliso inta lagu jiro wareega koobaad ee diiwangalinta ee fasalka uu cunugaagu galaayo. Tani waa qaabka ugu haboon ee aad kuxaqiijin karto inaad boos kahesho dugsiga aad doonayso in cunugaagu dhigto.
Laga bilaabo Janaayo 3 ilaa Feebaraayo 1, 2019: dugsiga barbaarinta (ilmaha da'doodu tahay 3 ama 4 ee dugsiga galaaya Sebteembar 1, 2019), fasalada 6aad, 7aad, ama 9aad diiwaangalinta wareega koobaad
Feebaraayo 11 - Maarso 22, 2019: dugsiga barbaarinta (K2 - da'da 5 marka lagaaro Sebteembar 1, 2019) ama fasal kasta oo kujira diiwaangalinta wareega koobaad
Majiraan meelayno dugsiyo gaar ah oo kajira dugisyada BPS?
Haa. Waxaa jira noocyo badan oo dugsiyada BPS ah oo ay ardaydu iskaqori karaan kuwaasoo ka baxsan hannaanka meelaynta caadiga ah.
Meelaynta ku Saleysan Baahiyaha gaarka ah – Dugsiyada qaarkood waxay bixiyaan barnaamijyo khaas ah oo loogu talagalay ardayda leh baahida waxbarashada, awooda jirka, iyo baahiyaha dhanka barashada luuqada; ardayda kujira barnaamijka Individualized Education Programs (IEPs, Barnaamijyada Waxbarashada Gaarka ah) iyo English Language Learners (ELLs, Ardayda Barata Luuqada Ingiriiska). Caadiyan, BPS waxay ku siin doonaan talooyin dheeraad ah iyo talooyin meelaynta inta lagu jiro diiwaangelinta.
Fasalada Casharada Sar sare– Dugsiyada qaarkood waxay bixiyaan Advanced Work Classes (AWC) ee fasalada 4-6. Haddii ardayga lagu martiqaado Fasalada Casharrada Sar sare ee ku salaysan natiijooyinka imtixaankiisa, isaga ama iyada waxaa loo soo diri doonaa ogaysiis bisha Janaayo waxaana loo diraya foomka dookha dugsiga oo ay ku jiraan AWC. Ardayda lagu martiqaaday oo doonaya in ay ka qaybqaataan waa in ay doortaan ikhtiyaarka dugsi ee sheegaya AWC (tusaale, "Murphy AWC"). Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhri halkaan.
Dugsiyada Imtixaanka– Boston waxay leedahay saddex "dugsi imtixaan" oo loogu talagalay ardayda fasalada 7 – 12. Ogolaanshaha dugsigani waxay ku salaysan tahay celceliska dhibcaha iyo dhibcaha imtixaanka Independent School Entrance Exam (ISEE, Imtixaanka Madaxa banaan ee lagu galo Dugsiga) oo ah imtixaan qaran. Ardayda danaynaya waa in ay hubiyaan inay qaataan ISEE oo ay u gudbiyaan dugsiyada imtixaanka liiska ay doorbidaan bisha Janaayo. Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhri halkaan.
Pilot High Schools– - Waxaa jira dhowr dugsi oo "pilot schools" ah oo ku yaal Boston kuwaas oo maamula hannaanka diiwaangelinta. Xaaladaha qaarkood, tani waxay ku lug leedahay foomka isqorida ee dugsiga. Boston School Finder wuxuu bixiyaa lifaaqyada foomamkaan diiwaan gelinta ee bogga macluumaadka dugsi kasta, ama waxaad macluumaad dheeri ah kafiirin kartaa webseetka BPS. Dugsiyada sare ee hogaanka haya oo ubaahan in si gaar ah la iskaga diiwaangasho waxaa kamid ah:
Horace Mann Charter Schools– Ogolaanshaha diiwaangalinta Horace Mann (oo sidoo kale loo yaqaan "in-district") oo ah dugsiyada charter ka ayaa leh bakhtiyaan nasiib furan. Boston School Finder wuxuu bixiya lifaaqa foomka isdiiwaangelinta oo ay qasab tahay inay buxiyaan ardayda danaynaysa kuwaasoo kujira bogga hore ee mid kasta oo kamid ah dugsiyada macluumaadka ee Horace Man charter. Dugsiyada Horace Mann charter waa:
Wax kale miyaa jira oo ah in aan ogaado?
Si aad macluumaadka ugu fiican uga hesho xarunta Soodhawaynta BPS ee aad booqanayso, waxaan si wayn kuugu dhiirigalinaynaa inaad qodobada soosocda samayso kahor intaan balanta xarunta aad kutagayso aan lagaarin:
lafariiso dugsigaad doonto oo katirsan BPSl si aad kulan ula qaadato hogaamiyaasha dugsiga, aadna ula hadasho macalimiintaaadna u aragto shaqada dugsiga
Xili hore iskaqor oonleen si BPS ay uboobsiiso hanaanka qorista ardayga
Balan kaqabso Xarunta Soodhawaynta xili hore si aadan layn dheer ugalin
Waxaad Macluumaad dheeri ah kaheli kartaa barta www.bostonpublicschools.org/register, ama daawo muuqaalkaan kasoo BPS oo kahadlaaya nidaamka isdiiwaangalinta:
Hanaanka isqorista ee Dugsiyada Commonwealth Charter
Commonwealth charter schools waa dugsiyo dawladeed oo aan xariir gaar ah ah lalahayn degmo gaar ah. Dugsiyada charter ka ee kuyaala Boston waxaa dhigta kudhawaad 11,000 oo arday kuwaasoo dhigta dhamaan fasalada magaalada oo dhan. Dugsiyada charter ku waa kuwo lacag la'aan ah si ay ardaydu udhigtaan iskagana qoraan ayadoo loomaraayo hanaan bakhtiya nasiib ah oo furan. Ardaydu uma baahna inay imtixaano ugalaan ama ay muujiyaan buundooyinka ay haystaan si ay uga qaybgaaan bakhtiyaa nasiibka. Haddii ay diiwaangalin kuhelaan hanaanka bakhtiyaa nasiibka ah, waxay dooran karaan inay dugsigay helaan kubiiraan iyo inay iskadiidaan.
Sidee ayaan uga diiwaangaliya ilmahayga dugsi gaarka loo leeyahay?
Waxaad iskaqori kartaa inta badan dugsiyada charter ka ee kuyaala Boston adoo adeegsanaaya nidaamka Codsiyada ee Boston Public Charter ee oonleenka ah. Waxaad dooran kartaa dugsiyada aad rabto si aad magacaaga ugu darto hanaanka bakhtiyaa nasiibka kadibna waxaad gudbin kartaa hal codsi. Bridge Boston Charter School wuxuu leeyahay nidaam isqoris oo gaar ah, kaasoo aad kahelayso halkaan.
Goorma ayaan ilmahayga u diiwaangeliya dugsi gaarka loo leeyahay?
Codsiyada oo idil waa in la soo gudbiya Febaraayo 28, 2019. Haddii aadan codsigaaga gudbin taariikhdaan, waa in aad sugto si aad u aragto haddii dugsiga leeyahay bakhti-nasiibka dheeraad ah xiliga danbe ee gu'ga, ama aad sugtaa ilaa sanadka danbe.
Nidaamka Isqorista ee dugsiyada Catholic ga ah
Kuna kuyaala daafaha magaalada, qoysas badan oo diimaha kaladuwan haysta ayaa doorta dugsiyada Catholic ga ah.
Sidee, Gormaana uga diiwaangeliyaa ilmahayga Dugsi Katooliga?
Dugsi kastaa wuxuu ku shaqeeyaa nidaam dalbasho oo wakhti kala duwan leh. Si aad macluumaad dheeri ah uga ogaato isqorista dugsiyo gaar ah, booqo bogga ay kuleeyihiin barta Boston School Finder kadibna dhagsii “Apply Now.” Batoonkaan ayaa kuugudbinaaya bogga codsiga diiwaangalinta ee dugsiga.
Si kaduwan dugsiyada BPS iyo charter ka, inta badan dugsiyada Catholic gu waxay qaadaan lacagta isdiiwaangalinta. Dugsiyadaan ayaa inta badan iskudaya inay bixiyaan taageero dhaqaale si ay uga dhigaan dugsiga mid qofkasta awoodo qarashkiisa, sidaas awgeed waa muhiim inaad wax kawaydiiso taageeradooda dhaqaale iyo fursadaha deeqda waxbar——— ––asho kahor intaadan codsan.
Nidaamka Isqorista ee dugsiyada METCO
Barnaamijka METCO, ardayda ka socdaan Boston waxay raacaan baska si ay ugu tagaan dugsiga magaalooyinka u dhow. Qoys kasta ee Boston kunool waxay xaq u leeyihiin in ay codsadaan METCO.
Sidee ayaan ilmahayga ugu diiwaangeliyaa METCO?
Waxaa jira liis sugitaan oo loogu talagalay METCO, sidaas daraadeed meeleyn laguma balan qaadin. Si aad iskuu diiwaangeliso, waa inaad u tagtaa shaqsi ahaan xafiiska oo ku yaala 40 Dimock St. oo katirsan Roxbury.
Ardayda waxaa lagu darayaa liiska sugayaasha ee METCO ayadoo loo kala hormarinaayo hadba sida taariikhdooda codsigu usoo kala horeeyeen, sidaas awgeed haddii aad dookhaan doonayso, waxaan kugula talinaynaa inaad xili hore isdiiwaangaliso. Waxaad macluuaad dheeri ah kaheli kartaa webseetka METCO.
Hanaanka Isqorista ee Dugsiyada kale ee Gaarka looleeyahay
Boston waxay hooy utahay in kabadan 30 dugsi oo gaar looleeyahay oo aan Catholic ahayn, kuwaasoo aad dhamaantood kaheli karto barta Boston School Finder.
Sidee iyo goorma ayaan ilmahayga uga diiwaangaliya dugsi gaarka ah?
Si ka duwan Dugsiyada BPS iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay, dugsiyada gaarka ah badankood xadiiritaankooda waa kharash. Dugsiyada qaarkood ayaa iskudaya inay bixiyaan taageero dhaqaale si ay uga dhigaan dugsiga mid qofkasta awoodo qarashkiisa, sidaas awgeed waa muhiim in aad wax kawaydiiso taageeradooda dhaqaale iyo fursadaha deeqda waxbarasho kahor intaadan codsan.